Painting, Drawing & Art Supplies – ICT.com.mm
Mont Marte MAXX0005 Artist Eraser Pack - 4PcsK5,000
Mont Marte MAXX0010 Canvas Hanger Pack Sml-20 PcsK6,000
Mont Marte MSB0118 Discovery Sketch Book 150gsm A3K16,000
Mont Marte CSST0101 Studio Canvas Pine Frame S.T.10 * 10cmK3,000
Mont Marte CMPL1010 Pack510.2x10.2cmK4,000
Mont Marte MAXX0005 Artist Eraser Pack - 4Pcs
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပုံစံအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: MAXX0005 PARAS ART FEVER SUITABLE FOR USE WITH Mont Marte Graphite products Mont Marte Charcoal products
Mont Marte MAXX0010 Canvas Hanger Pack Sml-20 Pcs
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပုံစံအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: MAXX0010 Mont Marte-Canvas Hanger Pack 40pc-MAXX0010 Hang up your artworks withoutahitch using this set of 20 D-ring hooks
Mont Marte MSB0118 Discovery Sketch Book 150gsm A3
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပုံစံအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: MSB0118 A3 (11.7 x 16.5in) size 30 sheets (60 pages) 150gsm Acid-free paper Heavyweight backing card
Mont Marte CSST0101 Studio Canvas Pine Frame S.T.10 * 10cm
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပုံစံအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: CSST0101 Canvas is back stapled foraclean edge look Ideal for light applications of paint Made from cotton duck for maximum colour retention Gallery...
Mont Marte CMPL1010 Pack510.2x10.2cm
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပုံစံအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: CMPL1010 Acid free 3mm canvas wrapped board Acrylic titanium primed Sturdy construction Warp resistant Easily framed Shrink wrapped
Mont Marte MPN0046 Woodless Graphite Pencils-6pc
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပုံစံအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: MPN0046 Superior quality graphite6grades of graphite HB, 2B, 4B, 6B, 8B & EE EE is 50% graphite and 50% charcoal Lacquer coated
Mont Marte MEA0050 Pastel Box Single Deck
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပုံစံအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: MEA0050 1 drawer with dividers (5 sections) Beech wood withadark redwood colour finish Magnetic drawer catches Made from sustainable plantation wood Brass hardware Measurements:...
Mont Marte Studio Stencil Brushes -3Pcs
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပုံစံအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Studio Stencil Brushes Pkt3 Item Code: MAA0021
Mont Marte Studio Canvas Pine Frame S.T 100x120cm
ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပုံစံအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Code: CSST1012 280 cotton duck Acrylic titanium primed 100 x 120cm (39.3 x 47.2in) pine frame Mont Marte Oil paint Mont Marte Acrylic paint Canvas can be tightened with...
Mont Marte Watercolor Pad Germen Paper A5 300Gsm 12Sheet
ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပုံစံအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 12 x White Sheets Acid Free A5 , 300gsm German Paper Rough Tooth Painting tips inside cover Item Code: MSB0067 အနည်းဆုံး (၂) ခုဝယ်ယူရပါမည်။ Mont Marte Premium Watercolour Pads have...
Mont Marte Signature Acrylic Colour 75ml - Lemon Yellow
ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပုံစံအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Our Acrylic Colours areagreat go-to for your art and craft projects. This paint featuresasmooth and creamy texture and can be used on most surfaces including...
Mont Marte Signature Acrylic Colour 75ml - Raw Sienna
ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပုံစံအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Mont Marte’s Poster Paint isatempera styled paint and is ideal for school students and art groups. With vibrant colour andamatte finish this fabulous paint is...
Mont Marte Watercolor Pad Germen Paper A3 300Gsm 12Sheet
ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပုံစံအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 12 x White Sheets Acid Free A3 , 300gsm German Paper Rough Tooth Painting tips inside cover Item Code: MSB0065 Mont Marte Premium Watercolour Pads have 12 sheets of...
Mont Marte Signature Watercolour Paints (12 Pcs x 12 ml)
ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပုံစံအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ High quality pigments Rich transparent colours Combination of warm and cool colours Excellent tinting strength Item Code: PMHS0027 Createamasterpiece, or play around and discover new ways to...
ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပုံစံအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Acid free A3 , 25 sheets 140gsm 2mm backing board Drawing tips inside cover Item Code: MSB0059 Mont Marte Signature Black Paper Sketch Pads have 25 sheets of 140gsm,...
Mont Marte Signature Watercolour Paints (24 Pcs x 12 ml)
ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပုံစံအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ High quality pigments Rich transparent colours Combination of warm and cool colours Excellent tinting strength Item Code: PMHS0049 Createamasterpiece, or play around and discover new ways to...
Mont Marte Signature Watercolour Paints (18 Pcs x 12 ml)
ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပုံစံအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ High quality pigments Rich transparent colours Combination of warm and cool colours Excellent tinting strength Item Code: PMHS0048 Createamasterpiece, or play around and discover new ways to...
Mont Marte Canvas Oval D.T. 45.7x66.0cm
ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပုံစံအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Acid free 380gsm 13Oz canvas 100% cotton duck high density weave triple coated universal primer back stapled 1.8 x 3.8cm MDF wooden frame shrink wrapped Item Code: CMOV4565 Mont...
Mont Marte Acrylic Paint Set (24 Pcs x 36 ml)
ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပုံစံအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Item Code: MSCH2436 Creamy texture Good coverage Suitable for most painting surfaces Dries toasemi-matte finish Handy hints: Clean up with warm soapy water while wet. Dive into the...
Mont Marte Canvas Heart Shaped 40x40cm
ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပုံစံအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Heart Canvases featurea18mm x 38mm (0.7 x 1.5in) frame made of MDF withamoulded edge Triple coated with universal primer and ready to be painted on...
Mont Marte Canvas Heart Shaped 30x30cm
ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပုံစံအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Heart Canvas featuresa18mm x 38mm (0.7 x 1.5in) frame made of MDF withamoulded edge Triple coated with universal primer and ready to be painted on...
Mont Marte Sketch Board With Clips Medium
ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပုံစံအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Item code: MAA0012 Constructed from 3mm masonite that providesasmooth durable drawing surface. Lightweight Sketch Board Easy-carry handle Suitable For Use With: Mont Marte Sketch Books, Mont Marte Watercolour...
ထုပ်ပိုးမှုဒီဇိုင်းပုံစံအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Mont Marte Waterbrushes are ideal for use on the move. The pressure-sensitive barrel delivers an even flow of water via the tip and the durable taklon bristles allow for...